ပြင်ပမှ ဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကိုလည်း သန့်စင်ပေးတဲ့ ? Better Skin Coffee Soap Scrub ? အခုလို ရောဂါတွေ ဆိုးရွားနေတဲ့အချိန်မှာ တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အပြင်ကနေ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ခြေလက်အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ကို သန့်စင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က ဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ? Better Skin Coffee Soap Scrub ? နဲ့ သန့်စင်လိုက်ပါ။ အရေပြားကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေရုံမကပဲ ပြင်ပမှ ဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို သန့်စင်ပေးတဲ့ ? Better Skin Coffee Soap Scrub ? ကို Arabica Coffee ၊ အာဖရိက မျိုးရင်း မန်ကျည်းအဆီအနှစ် ၊ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး နနွင်းမြစ်တို့ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ကော်ဖီအနံလေးကြောင့်လဲ လူကို စိတ်ကြည်လင် လန်းဆန်းတတ်ကြွစေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကိုလဲ ပိုမိုကောင်းမွန် မှန်ကန်မြန်ဆန်လာစေပါတယ်။ အသားအရေပြဿနာများကို ရာခိုင်နှုန်း လျော့ချကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့် နေ့စဉ်အသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အားလုံး အသုံးပြုနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားတာဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ Better Skin Coffee Soap Scrub (120 g) တစ်တုံး ၄,၅၀၀ ကျပ်
Zin Mon Latt
Ma Su Phyo Wai
BS Soap လေးနဲ့ ရေမချိုးဖြစ်တဲ့နေ့ဆို အသားအရေကြည်လင်သွားတယ်လို့ကို မခံစားရဘူး. နူးညံ့တဲ့ ကော်ဖီအမှုန့်လေးတွေ အစွမ်းနဲ့ ဆဲလ်အသေတွေ ဖယ်ရှားပေးမယ်. မန်ကျည်းအစွမ်းနဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ပြောင်စင်အောင် သန့်စင်ပေးမယ်. နနွင်းအစွမ်းနဲ့ အသားအရေ ၀င်းပလာမယ်. BS Soap 120 g တစ်တုံး ၄၅၀၀ ကျပ်. #BSSoap #GlowAndCleanBodySkin #Crd Order to ??09693110093(or) 09257721462 (or) ??Page Messenger မန္တလေးမြို့ ပြင်ဦးလွင်မြို့ လားရှိုးမြို့များ မြို့တွင်းအရောက်ပို့ငွေချေစနစ်လေးတွေရှိပါတယ်နော် အခြားမြို့များငွေလွှဲဝင်ပြီးကားဂိတ်မှပို့ဆောင်ပေးပါတယ်
Better Skin သဘာဝ ကော်ဖီ မန်ကျည်း နနွင်း ဆပ်ပြာ ကို ဘယ်သူတွေသုံးသင့်တာလဲ! မိမိအသားအရေကိုဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းလိုသော အမျိုးသား ၊အမျိုးသမီး တိုင်းအသုံးပြုသင့်သော အရည်အသွေးမြင့် နေ့စဉ်သုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသားအရေမညီမညာသူများအမဲစက် တင်းတိပ်နှင့်ဝက်ခြံများ ၊အသားမာများ ၊အသားအရေအမဲကွက်များနှင့်ဂျွတ်များကြောင့် စိတ်ညစ်ရသူများအတွက် မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်... Better Skin သဘာ၀ ‌ကော်ဖီ မန်ကျည်း နနွင်း ဆပ်ပြာ 120g တစ်တုံး ၄၅၀၀ ကျပ်